Please Help Me! [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Virus Problems » Please Help Me! [Problem]
1 Please Help Me! [Problem] on 27th September 2009, 6:07 pm
ကျွန်တော်တို့ ရုံးက စက်တွေမှာ ၀င်နေတဲ့ အကောင်တစ်ကောင်ပါ...
Virus လား, Trojan လား .. ဘယ်လိုနာမည်တပ်ရမလဲတော့ မသိဘူးဗျာ...
အွန်လိုင်းပေးမသုံးတော့ Windows ရဲ့ Messenger ဆားဗစ်ကနေ Internal Communication အတွက် သုံးပါတယ်... အဲဒီကနေပြန့်တတ်သလားတော့ မသိဘူးခင်ဗျ...
သူက စက်ရဲ့ ဖိုဒါတိုင်းမှာ readme.eml တို့ ၊ နောက်တစ်ခါ စက်ရဲ့ Hostname.eml စသည်ဖြင့် ဖိုင်တွေအများကြီးဝင်နေတယ်...
စက်တစ်လုံးဆိုရင် ဗိုင်းရပ်စစ်လိုက်တော့ တင်ထားတဲ့ Application မှန်သမျှရဲ့ EXE ဖိုင်မှန်သမျှကို Antivirus က ဗိုင်းရပ်ပါဆိုပြီး သတ်ပဲ သတ်ခိုင်းနေတယ်... အဲဒါနဲ့ အရင် Avast နဲ့ စစ်ကြည့်တယ်... မဖျက်ပစ်သေးပဲ Avast ကို ဖြုတ်ချပြီး NOD32 နဲ့ ပြန်စစ်တော့လည်း အတူတူပဲ... EXE မှန်သမျှကို ဗိုင်းရပ်ဆိုပြီး သတ်ခိုင်းတယ်...
ဗိုင်းရပ်မသတ်သေးပဲ စက်ရဲ့ Driver အခွေမရှိလို့ Driver Backup လုပ်ပြီး ၀င်းဒိုးအသစ်တင်လိုက်တယ်... နောက်တစ်ခြား Application တွေတင်ပြီး Antivirus နဲ့ Scan ပြန်စစ်တော့ အသစ်တင်ထားတဲ့ Application မှန်သမျှ ခုနလိုပဲ EXE ဖိုင်မှန်သမျှအကုန်လုံးကို Virus Alert တက်လာတယ်.... ဘာဆော့ဝဲလ်မှ သုံးမရတော့ဘူး... မထူးတော့တာနဲ့ စက်ထဲရှိသမျှ .exe ဖိုင်မှန်သမျှ အကုန် စစ်.. ဖျက်ပြီးတော့မှ ဖောမတ်ချ.. ၀င်းဒိုးပြန်တင်လိုက်ရတယ်...
နောက်အလုံးတွေမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ Messenger ဆားဗစ်တွေ အကုန် Disabled လုပ်ထားသော်လည်း...
ဒီပုံမှာပြထားသလို မက်ဆေ့ခ်ျတွေ ခဏ ခဏ တက်နေတယ်...
2 Re: Please Help Me! [Problem] on 27th September 2009, 7:11 pm
auto run ကိုပိတ်ထားလိုက်ပါလား
autorun killer လေးကိုအရင်run ပြီး virus စစ်လိုက်ကြည့်ပါလား
ပြီးတော့ အစ်ကိုတင်ထားတာ ဘယ် antivirus ဆိုတာနည်းနည်းလောက်ပြောပြပါလား
3 Re: Please Help Me! [Problem] on 27th September 2009, 8:34 pm
ဖြစ်နိုင်ရင် virus coding လေးသိချင်လိုက်တာ
4 Re: Please Help Me! [Problem] on 27th September 2009, 8:53 pm
မြိတ်အလုပ်သမားလေး wrote: အစ်ကိုရေဒါဆို auto run ကိုပိတ်ထားလိုက်ပါလား .............update ကောဖြစ်ရဲ့လား
တင်ထားတာက Avast 4.8 Professional ပါ... စထိတာကတော့ ဘယ်စက်ကနေ စထိတာလဲတော့ မသိဘူး ခင်ဗျ...
လက်ရှိထိတာကို သိနေတဲ့ စက်မှာတော့ CPE 17 Autorun Killer လည်း ရှိတယ်... Avast ကလည်း Update ဖြစ်တယ်ခင်ဗျ...
သုံးနေတဲ့ သူက မနိုင်တော့မှ လာပြောတဲ့အချိန်မှာ Scan စစ်လိုက်တော့
ခုနပြောသလို Exe မှန်သမျှဗိုင်းရပ်ပဲ ပြောနေတော့တာပဲ.. ဒါနဲ့ NOD 32
5 Re: Please Help Me! [Problem] on 27th September 2009, 9:01 pm
ဒါဆိုအစ်ကိုရေ kaspersky 2009 နဲစစ်ကြည့်ပါလား
ဒါနဲ့ spyware terminitor တို့နဲ့ရောစစ်ကြည့်ပါလား
အားရင် kaspersky 2010 တင်ပေးပါမယ်ဗျာ
6 Re: Please Help Me! [Problem] on 27th September 2009, 9:26 pm
Kaspersky ကိုပဲ update ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ စမ်းကြည့်ပါဦးဗျာ။
7 Re: Please Help Me! [Problem] on 27th September 2009, 11:00 pm
spy တစ်ခုခု ဖြစ်နိုင်လို့ ပထမဆုံး Spyware software များနဲ့ အရင် စစ်ကြည့်လိုက်ပါ ..
1 . ပထမဆုံး process မှာ ၀င်ကြည့်ပါ ဦး ( Virus များလားလို့ [You must be registered and logged in to see this image.] ) .. ရှိခဲံရင်တော့ ..
2 . Regcure software သုံးပြီး ရှင်းကြည့်ပါ ဒီဖိုရမ်မှာ တင်ထားပါတယ် .. ရှာကြည့်လိုက်ပါ [You must be registered and logged in to see this image.]
3 . Anit-virus ပြောင်းစစ်စေချင်ပါတယ် ..
4 . Virus ဆိုရင် Safe Mode နဲ့ ၀င်သတ် .. နောက်မှ repair ..
ဒီလောက်ဆို ပေါ်လာနိုင်သေးလား မသိဘူး .. ပေါ်လာရင်တော့ တစ်မျိုးပြောင်း မယ် [You must be registered and logged in to see this image.]
8 Re: Please Help Me! [Problem] on 28th September 2009, 6:34 pm
safe mode သုံးပြီးတက်ကြည့်ပါဦးလား
9 Re: Please Help Me! [Problem] on 28th September 2009, 9:06 pm
ဟိုဖက်နေ့က စက်ကတေ့ာ ဖောမတ်ချလိုက်လို့ နားတော့အေးသွားပြီ...
ဘာကောင်မှကိုကျန်တော့ဘူး.. မကျန်ဦးမှပဲလေနော.. စက်ထဲရှိသမျှ Program တွေလည်း ပြောင်ပါလေရောကို...
Wiki နဲ့ F-Secure မှာကြည့် တော့ကြည့်ထားတယ်.. အဲဒီအကောင်အောင်းနေတဲ့ နောက်ထပ်စက်တွေလာပို့မှ အဲဒီမှာ ဖတ်ထားတဲ့နည်းလေးတွေ နဲ့ စမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်...
ကူညီခေါင်းစားကူကြတဲ့ ညီအစ်ကိုတွေအကုန် ကျေးဇူးပါ...
စိတ်ဝင်စားတဲ့ ညီအစ်ကိုတွေအတွက် ...
F-Secure မှာတော့ Tool တစ်ခုထုတ်ပေးထားသလို ကိုယ့်လက်နဲ့မှသတ်ချင်ရင်လည်းသတ်လို့တော့ ပြောထားတာပါ... မစမ်းလိုက်ရဘူး...
နောက်ထပ်အဲလိုဖြစ်နေတဲ့ စက်တွေလုပ်ပေးရရင် ဒီနည်းလေးတွေနဲ့အဆင်ပြေမပြေပြောပြပါမယ် ညီအစ်ကိုတို့ရေ...
10 Re: Please Help Me! [Problem] on 16th November 2009, 1:39 pm
ကျွန်တော့်ဆီမှာလည်း တက်လာဒယ်ဗျ။ KAV, KAS 2009 ကလည်း မနိုင်ဘူး။ စက်၎-လုံးလောက်ကို တစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်တာ။ သူလာပြီဆိုရင် တော်တော်များများ .exe တွေ မ run တော့ဘူးဗျ။ အဓိက Mozilla တို့၊ flock တို့ လုံးဝဖွင့်လို့မရဘူး။ အရေးကြီးနေလို့ window အသစ်လေးနဲ့ပဲ နှစ်ပါးသွားခိုင်းလိုက်တော့တယ်။ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့သူများရှိရင် ကျွန်တော်လည်း သိချင်တယ်ဗျ။
11 Re: Please Help Me! [Problem] on 16th November 2009, 5:29 pm
moeyake wrote: ကျွန်တော့်ဆီမှာလည်း တက်လာဒယ်ဗျ။ KAV, KAS 2009 ကလည်း မနိုင်ဘူး။ စက်၎-လုံးလောက်ကို တစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်တာ။ သူလာပြီဆိုရင် တော်တော်များများ .exe တွေ မ run တော့ဘူးဗျ။ အဓိက Mozilla တို့၊ flock တို့ လုံးဝဖွင့်လို့မရဘူး။ အရေးကြီးနေလို့ window အသစ်လေးနဲ့ပဲ နှစ်ပါးသွားခိုင်းလိုက်တော့တယ်။ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့သူများရှိရင် ကျွန်တော်လည်း သိချင်တယ်ဗျ။
ဖွင့်လို့မရဘူးဆိုတာ ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ mouse icon ကသဲနာရီပုံပေါ်ပြီး ခဏလေးကြာမှ mouse icon ကနဂိုမြှားပုံပြန်ဖြစ်သွားတာလား။
12 Re: Please Help Me! [Problem] on 17th November 2009, 9:18 am
မဟုတ်ဘူးဗျ..... Dclick, Open, Enter ဘာပဲလုပ်လုပ် ပွင့်မလာတာ။ အဲ. Gtalk, VZO တို့တော့ တော့ရတယ်ဗျ။
13 Re: Please Help Me! [Problem] on 17th November 2009, 11:44 am
moeyake wrote: မဟုတ်ဘူးဗျ..... Dclick, Open, Enter ဘာပဲလုပ်လုပ် ပွင့်မလာတာ။ အဲ. Gtalk, VZO တို့တော့ တော့ရတယ်ဗျ။
အပေါ်က နည်းတွေနဲ့ရော ဗျာ .. မရဘူးလား အကို
14 Re: Please Help Me! [Problem] on 28th January 2010, 8:14 pm
ကျွန်တော် တော့မကြုံသေးဘူးအဲဒီကောင်ကို အဲအကောင်းဆုံးတောာအကြံပေးပါမယ်။
panda antivirus ကို ဒေါင်းပြီးသတ်ပါ။ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့် မယ်။ အခုမြန်မာမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ 
antivirus တွေထက်သာတာကိုတော့ကျွန်တော်အာမခံပါတယ်။ online ကဒေါင်းရင် ၃ လ အလကားရပါတယ်။
အားလုံး virus ရန်ကဝေနိုင်ကြပါစေ။
15 Re: Please Help Me! [Problem]